Nhau - Maitiro ekuona iyo yakajairwa inoyerera ngura uye ngura ye6082 aluminium ndiro
1 yakateedzana aruminiyamu pepa
7 Series Aluminium Sheet
Aerospace uye avhiyesheni
Maitiro ekuona iyo yakajairika inoyerera ngura uye ngura ye6082 aluminium ndiro
Mazhinji ari matura ekunze, 6082 aruminiyamu panze akarara mune isingadzivisike mhepo yekumhanya uye nezuva. Iyo inonzi ngura sekureva kunoita zita iri inoyerera ngura aruminiyamu 6082 yepamusoro dhayeti, pane tauro risina simba kana chimwewo chinhu, unogona kungobvisa ngura yemhangura, kwete ngura funga kuti iyi inzvimbo yakajairika.
Yenguva refu ngura ye6082 aluminium mahwendefa. Kwerinenge gore, rakafumurwa nemhepo nezuva, mushure mekuti ngura iine saizi makomba, unova mutsauko mukuru pakati pe6082 aluminium ndiro yakayangarara ngura uye ngura.
Wakaona iyo aluminium ndiro kuburikidza nesimbi pombi isina chinhu chikamu. Iyo yakanakira ndeyekuti hapana kusungunuka kwezvinhu zvekusheedzera mune yekumonera maitiro, hapana waya yekuzadza uye inodzivirira gasi, hapana arc, radiation, utsi uye gasi ine chepfu mune yekumonera maitiro, yakakwira degree of yemuchina michina uye yakakura kugadzirwa.
Zvichienderana nezvakanaka zvakawanda zveFSW, nzira yenyika dzakasimukira senge Europe, FSW yanga ichishandiswa zvinobudirira mumaindasitiri minda senge ndege, muchadenga, kuvaka ngarava, zvitima zvekumhanya-mhanya nemota. Muindasitiri yegungwa, kunyanya muEurope, Japan neNorway, FSW yakave isingaremi, inomhanyisa, aluminium alloy yekugadzira maitiro anotungamira kuchikepe.
Zvichienderana nezvakanakira yemhando yepamusoro yeFSW, kugona kwepamusoro uye nemutengo wakaderera, hunyanzvi uhu hwekujoinisa hunowedzerwa zvishoma nezvishoma kuzvikepe zvemauto uye zviri kuramba zvichishandiswa zvakanyanya. MuChina, FSW iri kusimudzirwa muindasitiri yekuvaka ngarava kuburikidza nekusimudzira kweChina Shipbuilding Industry Center pamwe nekubatana kwevashandi pamwe navo muindasitiri yekuvaka ngarava.
Parizvino, kushandiswa kwekukweshera kunokonzeresa kuwanda muindasitiri yekuvaka ngarava iri kunyanya mu: chikepe chengarava, pamahwendefa epasi, pasi peplate yekunze, madziro emadziro, madziro asina mvura, ndiro yepasi, hura yeganda uye akakosha masisitimu epamusoro. chimiro, helikopta yekumhara papuratifomu, chikepe chechikepe uye zvikamu zvemuumbirwo, ngarava dzekuredza dzakaomeswa ndiro isina mhango, nezvimwe.
Kaihua Aluminium yakazvipira kuvaka iyo yepamhepo nyanzvi-yekumira simbi mbishi yekutenga chikuva, akawanda-marudzi epamberi maitiro, iro hombe bhizinesi realuminium ndiro, aluminium coil, aluminium strip, aluminium tsvimbo, aluminium chubhu, aluminium pateni aluminium ndiro uye mamwe marudzi. yealuminium, yakazara yakatarwa uye mamodheru.
*** Inoshandurwa ne www.DeepL.com/Translator (yemahara vhezheni) ***
Ndeapi akasiyana mafomu e ...
Maitiro ekuona iyo yakajairwa inoyerera ngura uye ...
Maitiro ekuchenesa ekushongedza aluminium plat ...
Kero: Maodzanyemba eWenzhou Avenue, Xuzhou Industrial Park, Jiangsu Province China
aluminium alloy 6061 mutengo, Anodized Aluminium Sheet Metal Vanopa, Tsika Plate Aluminium Sheets, Yakachipa Aluminium Sheets, 7050 aluminium pepa, aruminiyamu yakarongedzwa pepa mutengo,